Kenya oo ku dhawaaqday mowqif adag oo ku saabsan muranka badda hanjabaadna ay la socoto – Walaal24 Newss
February 21, 2019	1	By walaal24
Wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa galinkii dambe ee maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday mowqifkeeda ku aaddan arrintan ku saabsan muranka badda, iyadoo sheegtay in tallaabadii ay Soomaaliya qaadday ay ahayd mid qallafsan.
Monica Juma ayaa si cad u sheegtay in aysan Soomaaliya marnaba gacanta u galin doonin xitaa qeyb yar oo ka mid ah dhulka ay ku fadhiso xuduudda badda ee ay ku muransan yihiin.
“Ma jirto dowlad aan ku wareejineyno taako ka mid ah dhulka ay Kenya leedahay”, ayey tidhi Ambaasadoor Monica Juma.
Juma ayaa sheegtay in Kenya ay wali Soomaaliya ka sugeyso jawaab faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha ugu waaweyn ee lasoo hadal qaaday, iyadoo dhanka kalena xustay in Kenya ay aad isugu dayeyso iney “isxakameyso”, oo aysan tallaabo xad-dhaaf ah qaadin.
“Dalal ayaa dagaal u galay wax aad uga yar arrintan oo kale”, ayey tidhi Ms Juma.
Waxay dalbatay in Soomaaliya ay sharraxaad buuxda ka bixiso qodobada ay Kenya taabatay ee ku saabsan meelaha shidaalka qaniga ku ah ee la beeciyay.
Wasiiradda oo ka hadleysay shir jaraa’id oo ay warbaahinta u qabatay ayaa hoosta ka xariiqday in ay jiri karto cunaqabateyn ay ku soo rogaan Soomaaliya, taasoo ku xiran hadba sida ay noqoto jawaabta ay xukuumadda Muqdisho ka bixiso sharraxaadda laga dhowrayo.
Qeyb ka mid ah sharraxaadda ay Soomaaliya ka sugayaan ayey sheegtay in ay tahay raalli galin laga doonayo in Soomaaliya ay siiso Kenya””’.
Muranka culus ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku saabsan afar waaxood oo ka mid ah dhulka ay badda ku fadhiso ee u dhow xadka biyaha ee kala qeybiya labada waddan.
Dhammaan afarta qeybood ee ay isku hayaan labada dal ee dariska ah ayaa qani ku ah kheyraadka saliidda.
Qoraagaasi oo ahaa Tifaftirihii hore ee Maamulka iyo Mashaariicda Khaaska ee Wargeyska Daily Nation, Majaariya Gaytho waxa uu bishan 19-dii Maqaal dheer ku qoray Daily Nation, isagoo taxliil iyo is-barbar dhig ku sameeyey Go’aankii Dowladda Kenya ka qaatay Khilaafka Kenya iyo Tallaabooyin kale ee muhiimka ee loo baahnaa in culayska la saaro.
Waxa uu sheegtay in xulashadda kale ee aan lagu xusin Warqadda Dowladda Kenya ka soo saartay Khilaafka Somalia tahay inuu dalka Kenya Soomaalida u tahay hoygoodii 2-aad ee Xafiisyadda Nidaamka Maamulka ee Saraakiisha Ururadda iyo Waaxyaha Dowladda Somalia.
Sidoo kalena ay Siyaasiyiin Sarsare, Shaqaalaha Dowladda iyo Saraakiisha Ciiddamadda Soomaalia ee guryaha qoysaska ku leh gudha Kenya.
Qoraagaasi waxa uu qormadisa ku sheegay inay maalgashi culus ku sameysteen Hanti-ma-guurto iyo Ganacsi iyo inay Kenya u adeegsadaan sidii Dal lagu qaado Lacagaha, waa sida uu hadalka u yiri.
Dacwad ku saabsan murankan ayaa hor taalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda(ICJ), taasoo laga dhowrayo iney dhageysato, ka dibna go’aan kasoo saarto.
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray Sabtidii lasoo dhaafay, ka dib markii ay Kenya amar ku bixisay in Safiirkii Soomaaliya ee Nairobi ku sugnaa uu dib ugu laabto Muqdisho, iyadoo sidoo kalena u yeeratay danjiraheedii Soomaaliya fadhiyay.
Dhageyso: Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay qilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya
Laba hoggaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo Maraykanka oo Liiska argagixisada ku daray
Gudomiayaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo dib ugu soo celiyey Gurigooda qoys dan-yar ah
Wadooyinka muhiimka magaalada Muqdisho oo saaka xiran Ciidamo farabada lagu arkaryo
Guddiga qorsheynta iyo maaliyadda Baarlamaanka Soomaaliya oo howl shaqo u jooga Dalka Ruwaanda
Marakiib laga leeyahay Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo Weerar lagu qaaday
Dowladda Kuuriyada Woqooyi oo Gantaalo tijaabo ah ku gantay magaalada Wonsan
Madaxweynaha Mareykanka oo ku goodiyay inuu cunaqabatayn adag saari doono Madaxweynaha Venezuela
Mareykanka oo sheegay inay kaalin ka qaadanayaan xallinta muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya
Daawo: Afhayeenka Madaxtoyada SL oo ka war bxiyay Madaxweyne Muuse Biixi oo safar shaqo ku tagay magaalada Berbera ee Gobolka Saaxil
Toos u Daawo: Munasabada xuska sanadaguurada 58aad ee 1da Luuliyo 2018
Daawo: Madaxweyne Dani oo sheegay safarkiisu inuu la xiriiro iskaashi dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo maal-geshiga ganacsi
Daawo: Odayaasha Boosaaso ee Puntland oo hanjabaad adag u diray Madaxweynaha Puntland.